ओलीलाई प्रचण्डको सन्देश : उधारो सम्झौता हुँदैन ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
ओलीलाई प्रचण्डको सन्देश : उधारो सम्झौता हुँदैन ?
सत्तारुढ दल नेकपाले तत्काल नयाँ सभामुखबारे निर्णय गरिहाल्नुपर्ने वाध्यता छ। सम्भवत संसदको अधिवेशन बोलाउँदै गर्दा नेकपाले यो विषयमा निर्णय लिनेछ। तर, यो विषयमा निर्णय गरिहाल्न नेकपामा भने समस्यै समस्या छन्।